Nweta izi ezi nke submeta site na iPad / iPhone - Geofumadas
Febụwarị, 2015 GPS / Equipment, mbụ echiche
Onye natara GPS nke ngwaọrụ iOS, dịka iPad ma ọ bụ iPhone, na-enweta ihe ziri ezi n'usoro nke ihe nchọgharị ọ bụla ọzọ: n'etiti mita 2 na 3. Ewepu na GIS Kit, ihe ole na ole ndị ọzọ anyị hụla iji meziwanye nzibi ya, Otú ọ dị, site na mkpakọrịta nke enyi, anyị na-ahụ mmasị na ilele egwuri egwu a na, n'adịghị ka Kwenye A na-etinye nke a n'ime ngwaọrụ mkpanaka.
N'agbanyeghị na ọ dị ka ngwaọrụ dị mfe, Bad Elf GNSS Surveyor bụ onye nnata ọhụrụ ma dị ike nke na, site na Bluetooth, na-enye ngwaọrụ mkpanaka nhọrọ nke ịghọ onye nnata GNSS, gụnyere ihe mmetụta barometric iji nweta elu karịa ọkwa mmiri. Na ada ọ na-arụ ọrụ dịka ihe nchọgharị, mana na ọnọdụ static, ọ nwere ike nweta SBASS ziri ezi na obere mita, yana nkwado post-nhazi (DGPS) na-eru ụkpụrụ n'etiti 10 na 50 centimeters.
Enwere ike iji ya na 5 ngwaọrụ n'otu oge via Bluetoot.
Maka ọnụahịa ọ nwere, ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ, ebe ọ bụ na ọ dị ka ihe ọzọ na-adọrọ mmasị maka ibuli na nkwekọrịta dị mma na ọnụ ala.
Kedu ihe ziri ezi nke Bad Elf GNSS Surveyor na-enye
Nkọwa Position Kwesịrị Ekwesị (PPP): maka static ngwa na ezi visibiliti. PPP na-eji mgbaàmà nke ndị na-ebu ụgbọelu iji belata mgbagha ionosphere na akara ngosi ọtụtụ ụzọ. Nke a na-enye otu mita ziri ezi na-enweghị na-ezo aka na mpaghara ọdụ ma ọ bụ ndị ọzọ mgbazi isi mmalite.
Ọrụ Mgbakwunye Space (SBAS): Site na kpakpando nke Satellites, SBAS na-enye ndozi data maka orbit, elekere na nsogbu ihu igwe ma ọ bụ ọdụ nrụtụ dị na ala. Ihe mkpuchi gụnyere North America (WAAS), Japan (MSAS), Europe (EGNOS), na India (GAGAN). SBAS n'onwe ya gụnyere ọnọdụ kwụ ọtọ na izi ezi nke mita 2 ruo 2.5.
Ntọala Dị Iche Iche GPS (D-GPS): A na-enweta nduzi site na ọdụ ụgbọ elu n'ebe ọ bụla n'ụwa, ebe GNSS na-akwado usoro ọrụ ụlọ ọrụ RTCM 2.3 maka ịrụ ọrụ dịka onye na-arụ ọrụ D-GPS.
Nhazi akwụkwọ data maka RTK: Maka ojiji ebe achọrọ ezigbo mma (site na 10 ruo 50 centimeters), data raw na SBAS nha dị maka ngwa nhazi na ezigbo oge kinematic (RTK). A na-enweta data a site na SDK na faịlụ ndekọ echekwara na ọnọdụ standalone.
Bad Elf GNSS Surveyor nwekwara ike ịnye data GPS na NMEA ọnọdụ nkwanye site na Bluetooth ma ọ bụ USB maka ngwaọrụ ndị na-abụghị iOS, dịka mobiles na-agba ọsọ na gam akporo, Windows, Mac OS X ma ọ bụ Linux. Ọ bụ ezie na ugbu a, nkwado maka nyiwe ndị a ejedebe.
Ihe na-esonụ na-egosi otú e si nweta ihe nrịgoro na mbido a na-enweta ihe ndekọ dị n'akụkụ mita atọ, na-agbada mita abụọ, nkwụnye ihe dị mma na-anara nke ọma tupu minit anọ ahụ.
Egwuregwu GPS Bad Elf GNSS Surveyor.
GNSS kpọmkwem ihe na-erughị otu mita na ụzọ awara, suando SBASS + PPP.
10 ka 50 cm ziri ezi site na iji ngwa nhazi nhazi. N'ọdịnihu ha kwere SDK nkwa maka mmepe nke atọ.
Na-akwado nhazi postcards (DGPS), na-eji nyocha RTCM site na netwọk nke ụlọ ọrụ ebe ederede.
Ịnweta 56 GPS, GLONASS na ọwa QZSS na SBASS (WAAS / EGNOS / MSAS)
Mgbe ọ na-aga, ọ na-enye nkenke GPS nke mita 2.5.
Ụdị ọnụahịa ahaziri 10 Hz.
Ọnọdụ ngosi anya, GPS + GLONASS na ihuenyo LCD na-egbuke egbuke.
Ndụ batrị, ruo 35 awa. Ọ bụ ezie na ọ na-akwado ihe ruru 200 awa na-enweghị nnabata mode.
Enwere ike ịhụ ya site na PC site na eriri USB, ọ dị ka ụgbọala eletrik.
Njikọ njikọ na ọnọdụ iyi na PC ma ọ bụ Mac.
Na-agụnye barometer iji nweta elu.
Mmalite na-ekpo ọkụ dị ka ngwa ngwa dị ka otu sekọnd, yana nnabata satịlaịtị na-enweghị ịdabere na ụlọ elu ekwentị. (Anaghị achọ ịntanetị maka ịnweta GPS).
Enwere ike iji ya ruo mita 18,000, ma ọ bụrụ na ikuku ikuku, ma ruo 1,600 kilomita kwa awa.
Ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ nke aka ya, na-emeziwanye nnabata nnabata na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa iOS ọ bụla, mana chọrọ ijikọ aka na iji Bad Elf SDK iji nweta atụmatụ ndị dị elu. Ka ọ dị ugbu a, ndị nrụpụta ya amalitela ịrụsi ọrụ ike na ọtụtụ ndị mmepe ngwa GNSS na-akwado.
Mgbe ịzụrụ ngwaọrụ ahụ gụnyere:
BE-GPS-3300 GNSS weghaara ngwaọrụ.
90cm USB cable maka ikuku ike.
Chaja nbanye 12-24 volts.
Lanyard Dị Oké Ọnụ Ahịa.
Ọ bụ dakọtara na iPod, iPad na iPhone ngwaọrụ:
Ọgbọ ise iPod aka.
iPhone 5S, 5C, 5, 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, na iPhone 3G.
iPad Air, iPad (Nke atọ na nke anọ), iPad 2, iPad.
iPad mini na Retina ngosi, iPad obere.
Ọnụahịa na nkwalite na-aga na 499 dollar.
Ọ bụghị ihe ọjọọ, ma e jiri ya tụnyere otu ụdị nke ụdị ama ama, ọ ruru $ 1,900 - ma ọ bụ karịa. Offọdụ n'ime ihe kachasị mma m hụgoro na nyocha nyocha dị ọnụ ala, ọ bụ ezie na a ga-anwale ya iji jide n'aka na ọ bara uru na nnukwu ịzụta maka nnukwu ọrụ.
Ebe ị nwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ.
Previous Post«Previous Gbasara ohere ugbu Manager maka Bricscad
Next Post Geomarketing vs. Nzuzo: Mmetụta nke Geolocation na onye ọrụ nkịtịNext »
3 Na-aza "Nweta Submeter Ezigbo site na iPad / iPhone"
Dan Ericson kwuru, sị:
Jag är i stort behov av instruktioner ọjọọ Bad Elf GPS pro fungerar hur jag skall ställa in den för es få den att makaka så noggrant som möjligt
Na-agba ọsọ ezumike nká Dan Ericson
Ebee ka m nwere ike ịhụ ya na Mexico?
dị oke oke ọnụ maka nkenke doro anya na ejiri